सेल्टल्ट: वेब डाटा एक्सटेक्चर - डिजिटल मार्केटर्सको लागि एक सही अनुप्रयोग
डिजिटल मार्केटर्स मुख्यतः सामाजिक मीडिया, ईमेल र अन्य प्लेटफार्महरू. तिनीहरू डिजिटल प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ जस्तै विज्ञापनहरू, इमेल मार्केटिङ, र फोन मार्केटिंग सबै दुनियाभरका नयाँ ग्राहकहरू भेट्न. एक डिजिटल मार्केटले मुख्य रूपमा आफ्नो कार्यहरू अनलाइनलाई प्रदर्शन गर्दछ र दैनिक आधारमा धेरै डेटा स्क्रैपिंग परियोजनाहरू निकाल्छ। - bf goodrich 225 75 r15. वेब डेटा एक्सटेक्टरले डिजिटल मार्केटहरूलाई उनीहरूको ब्रान्डहरू प्रचार गर्न र बजारमा सहयोग पुर्याउँदछ. साथै, यो उपकरणले इन्टरनेटमा अधिक सुरू उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ.
व्यापारियों को लागि बिल्कुल सही:
डिजिटल विपणन र वेब स्क्रैपिंग को तरिका लाई कारोबार को बदलन छ, र ब्रान्डहरु लाई आफ्नो उत्पादनहरु र सेवाहरु को प्रचार. वेब डेटा एक्सटेक्टरको साथ, तपाईं मात्र ठूलो संख्यामा ग्राहकहरू लक्षित गर्न सक्नुहुन्न तर उन्नत मार्केटिंग प्लानहरू र रणनीतिहरू पनि समावेश गर्न सक्नुहुनेछ. तपाईं एक घण्टामा धेरै वेब पेजहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईं चाहानुहुन्छ र यसरी तपाईंको व्यवसाय बढाउनुहोस्.
प्रयोगकर्ताको अनुकूल उपकरण:
यो उल्लेख गर्न सुरक्षित छ कि वेब डाटा एक्सटेक्टर एक सजिलो प्रयोग सेवा हो. यसले तपाइँलाई SEO, SEM, सामग्री मार्केटिंग, सामग्री स्वचालन, प्रभावकारी विपणन, डेटा संचालित विपणन, र विज्ञापन प्रदर्शनको रूपमा तपाईंको डिजिटल मार्केटिङ प्रविधिको सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।. वेब डाटा एक्सटेक्टरले अहिलेसम्म लाखौं वेब पृष्ठहरू स्क्रैप गर्न दाबी गरेको छ, र डेटा विश्लेषकहरूले मुख्य रूपमा यो उपकरणलाई गतिशील र ई-वाणिज्य वेबसाइटहरूबाट जानकारी निकाल्न प्रयोग गर्छन्।. तपाईं यो सेवाको साथ सम्पूर्ण वा आंशिक वेबसाइट स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग कार्यहरू एक राम्रो तरिकामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ.
सामाजिक सञ्जाल साइटहरूको लागि राम्रो छ:
वेब डाटा एक्सटेक्टरको साथ, तपाईंले YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn र सजिलै संग सोशल नेटवर्किङ वेबसाइटहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ।. तपाईं पनि (2 9) स्क्रैप डाटा छलफल फोरमबाट, समीक्षा वेबसाइटहरू र बीबीसी र सीएनएन जस्ता समाचार पत्रहरू गर्न सक्नुहुन्छ. साधारण डेटा स्क्रैपिंग उपकरणहरूको साथ, तपाईं सीएनएन र बीबीसीबाट डेटा निकाल्न सक्नुहुन्न; तर वेब डेटा एक्सटेक्टरले धेरै कार्यहरू गर्छ र तपाईंको साइटको अनुसार यी साइटहरूबाट एकत्रित, व्यवस्थित र निकाल्न सक्छ.
वेब डेटा एक्सटेक्टरको सबैभन्दा धेरै विशेष विशेषताहरूमध्ये यो धेरै संस्करणहरूमा उपलब्ध छ: कुलीन संस्करण, नि: शुल्क संस्करण, र व्यावसायिक संस्करण. यसको नि: शुल्क संस्करण फ्रीलान्सर, सानो आकारको कम्पनी र गैर-प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छ. कुलीन र व्यावसायिक संस्करणहरू उद्यम, डिजिटल बजार र कार्यक्रमका लागि राम्रो छन्. वेब डाटा एक्सटेक्टरको साथ, तपाइँ जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सजिलै संग उत्पाद विवरणहरू र तस्विरहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ.
कुनै रखरखावको आवश्यकता छैन:
अन्य साधारण (3 9) डेटा स्क्रैपर्स र वेब क्रेलरहरू, वेब डाटा एक्सटेक्टरको विपरीत कुनै पनि मर्मतको आवश्यकता छैन. तपाइँसँग यो उपकरण प्रयोग गर्नको लागि उन्नत कोडिंग कुञ्जीहरू पनि आवश्यक पर्दैन. यदि तपाईंले पाइथन, सी ++, सुन्दरस्पप र रूबी जान्नुभएन भने, तपाइँ अझै पनि वेब डेटा एक्सटेक्टरबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ र यसको आधारभूत र उन्नत सुविधाहरूको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ।. यो उपकरण न केवल तपाईंको लागि डाटा स्क्रैप हुनेछ तर यसको छोटो पूर र लामो-पूरै कीवर्डहरूमा आधारित यो पनि व्यवस्थित गर्नेछ. साथै, यसले स्वचालित रूपमा तपाईंको वेब सामग्री प्रकाशित गर्छ र तपाईंको समय र सबै बचतलाई तपाईंको डेटामा सबै साना त्रुटिहरू फिक्स गर्दछ.
ठेगाना प्रमाणीकरण र स्प्याम सुरक्षा:
वेब डाटा एक्सटेक्चरले तपाईंको लागि ईमेल ठेगाना प्रमाणित गर्दछ, तपाईलाई संगठित फारममा तपाईका ग्राहकहरूको पूर्ण सूची दिँदै. यसको अतिरिक्त, यो सेवा स्प्यामको विरुद्धमा सुरक्षा गर्दछ र ह्याकर र स्प्यामरहरूलाई तपाईंको वेब सामग्रीमा पहुँच गर्नबाट रोक्छ.